IPO Archives - Nagarik Today
होम » IPO
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण्मा कुल रू. ८ करोड बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने भएको हो । कुल कित्तामध्य २ प्रतिशत दरको १६ हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत दरको ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागेको हो ।
यो शेयर छिटोमा असोज १४ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा असोज २५ गतेसम्म विक्री खुला गरिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले स्थानिय सहित सर्वसाधारणमा प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यको १२ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएकोमा पहिलो चरणमा ४ लाख कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुमा बाँडफाँट गरेको हो ।
कम्पनीले नुवाकोट जिल्लामा तल्लो तोदी खोलाको पानीबाट ४ दशमलव ९९३ मेगाबाट क्षमताको तल्लो तोदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस आयोजना निर्माणको कुल लागत रू. १ अर्ब १९ करोड रहेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अपस्किृत वित्तिय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव ५६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ७१ दशमलव ४९ रहेको छ । उक्त अवधिसम्म कम्पनीले रू. ३ करोड ६८ लाख ३२ हजार खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
सर्वसाधारणका लागि ७० करोडको आईपीओ आउँदै
साहस उर्जा लिमिटेडले यही असोज ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीका अनुसार उक्त शेयर सर्वसाधारणले असोज १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकतममा १० लाख ५० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा लाईफको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च
भदौ १७ गतेदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य निरन्तर उच्च दरमा बृद्धि भईरहेको छ । पहिलो कारोबार दिनदेखिनै सर्किट लेभलमा मूल्य बढ्दै आएको कम्पनीको चौथो कारोबार दिनमा पनि १० प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भई प्रतिकित्ता रू. ४५२ दशमलव २० पुगेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४१ दशमलव १० ले बढेको हो ।
कम्पनीको शेयर खरिद चाप उच्च हुँदा मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । मंगलवार कम्पनीको शेयर खरिद चाप उच्च रहेको छ । कारोबारको दोस्रो घण्टासम्मको अवधिमा कम्पनीको ५ लाख ४४ हजार ३०८ कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । विक्री कर्ता भने देखिएका छैनन् ।
कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि नेप्सेले प्रतिकित्ता रू. १०३ दशमलव १७ देखि रू. ३०९ दशमलव ५१ सम्मको मूल्य रेञ्ज तोकेको थियो । नेप्सेले तोकेको अधिकतम मूल्य रू. ३०९ मै कम्पनीको शेयर कारोबार खुला भएको हो । चार कारोबार दिनमा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ११२ दशमलव ३० ले बढेको छ । पहिलो कारोबार दिन १० प्रतिशत मूल्य बृद्धि भई कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. ३३९ दशमलव ९० कायम भएको थियो ।
भदौ १८ गतेदेखि आईपीओ विक्री गर्दै सामलिङ्ग पावर कम्पनी
by नागरिक टुडे भदौ १७, २०७८
सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले भदौ १८ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले यस अघि साउन २२ गतेदेखि उक्त आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा त्यस क्षेत्रमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न निशेधाज्ञा गरिएकाले आईपीओ निष्कासन प्रकृया स्थगित गरिएको थियो । परिस्थिति सहज भएसँगै कम्पनीले आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानियलाई रू. ५ करोड बराबरको ५ लाख कित्ता शेयर विक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणका लागि रू. १२ करोड ३० लाख बराबरको १२ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ विक्री गर्न असार ३१ गते बोर्डको अनुमति पाएको कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानियमा शेयर जारी गर्न लागेको हो ।
आयोजना प्रभावितहरुका लागि छुट्याएको कुल कित्तामध्य पनि कम्पनीले ईलाम जिल्लाभरीका वासिन्दाहरुका लागि ६० प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता र अति प्रभावित क्षेत्र इलामा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र १० तथा माईजोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ का वासिन्दाहरुका लागि ४० प्रतिशत अर्थात २ लाख कित्ता शेयर विक्री गर्नेछ ।
यो आईपीओ छिटो अवधि असोज १ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने असोज १७ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । यो शेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो शेयर विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैैंकिङ लिमिटेड रहेको छ ।
विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, एनएमबि बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ईलाम शाखा र सिभिल बैंक लिमिटेडको माईजोगमाई शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनको शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
यस कम्पनीले इलाम जिल्लामा ९ दशमलव ५१ मेगावाट क्षमताको माईबेनी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको अनुमानित कुल लागत प्रतिमेगावाट रू. २१ करोड ३ लाख ५ हजार रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३७ करोड ७० लाख रहेको छ ।
संस्थापक तर्फ कम्पनीमा ७५ दशमलव ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम रहेको छ । सर्वसाधारणमा कम्पनीले २४ दशमलव ६० प्रतिशत शेयर विक्री गर्न लागेको हो । यसमध्य पनि स्थानियमा १० प्रतिशत र कर्मचारी सहित सर्वसाधारणमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्रीपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५० करोड पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९८ दशमलव ७७ रहेको छ ।
भदौ १७, २०७८0comment
तेह्रथुम पावरको आईपीओमा आज सम्म आवेदन दिन सकिने
by नागरिक टुडे भदौ १३, २०७८
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले भदौ ९ गतेदेखि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय अंकित दरको ८ करोड बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ मध्ये ५ प्रतिशत दरको ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि बाँडफाँट गरिसकेको छ । २ प्रतिशत दरको १६ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । शेयर खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । शेयर विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
भदौ १३, २०७८0comment
जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता पाँच हजार नाघ्यो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको शेयरमूल्यमा आज बिहिबार पनि पोजेटिभ सर्किट देखिएको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै निरन्तर सर्किट लागेको यस लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता पाँच हजार नाघेको छ । कम्पनीको शेयर खरिद चाप हरेक दिन उच्च हुदाँ मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो ।
नेप्सेका अनुसार यस अवधिमा जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमूलय ४७२.६० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ५१९८.९० पुगेको हो । साथै, आठ करोड भन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ ।
कम्पनीको शेयर कारोबारको पहिलो दिन साउन १४ गते प्रतिकित्ता रू. ९१४ मा खुला भएको थियो । बिहीवारसम्म कम्पनीको १९ दिन शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीले असार ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री गरी असार २३ गते बाँडफाँट गरेको थियो ।
भदौ १०, २०७८0comment
दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा पोजेटिभ सर्किट
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मंगलबार दोहोरो अंकले ओरालो लागिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से २९ अंकले घटेको छ भने करिब ९ अर्बको कारोबार भइसकेको छ ।
नेप्सेका अनुसार यस अवधिमा गोर्खाज फाइनान्स र जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको शेयरमूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको हो । आज गोर्खाज फाइनान्स कम्पनीको शेयरमूल्य बढेर १२८.२० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १४१०.२० पुगेको छ भने जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको शेयरमूल्य ३९०.६० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ४२९६.७० पुगेको छ ।
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, ३ जनाले पाए ११/११ कित्ता
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीले गत साउन २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि विक्री खुल्ला गरेको ३ लाख ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर आईपीओ सोमबार बिहान बाँडफाँड गरेको हो । गोलाप्रथाबाट गरिएको बाँडफाँटमा कुल ३६ हजार ८ सय ५६ जनाले १०र१० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् भने लक्की ३ जनाले ११र११ कित्ता सेयर पारेको विक्री प्रवन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्टले जनाएको छ।
कम्पनीको आईपीओ लागि कुल २३ लाख ५४ हजार ७ सय ८४ जनाले २ करोड ९५ लाख ७४ हजार ७ सय ५० कित्ताका लागि दिएको आवेदन सदर भएको थियो भने ७ हजार ४३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो।
कम्पनीले गत साउन २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि कुल ३ लाख ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर आईपीओ निष्काशन गरेकोमा ५ हजार ४ सय ६९ कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको १९ हजार ६ सय ८८ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको र ३ लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको थियो।
सेयर बाँडफाँडको नतिजा (रिजल्ट) बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङको वेबसाइट र मेरोसेयर एकाउन्टबाट हेर्न सकिन्छ भने मानुषी लघुवित्तको वेबसाइट तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङले आइपीओ रिजल्टबाट समेत हेर्न सकिनेछ।
न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङका स्थानीय बासिन्दा तथा संस्थापक सेयर धनीका लागि आजबाट बिक्री खुला गरेको हो ।
सो आईपीओ छिटोमा यही भदौ १५ गतेसम्म र ढिलोमा भदौ ३० गतेसम्म बिक्री खुला हुने जनाइएकोछ । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० अङ्कित मूल्यका कूल १८ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि पाँच लाख, जिल्लावासीका लागि १० लाख र बाँकी तीन लाख कित्ता सेयर कम्पनीले आफ्ना संस्थापक सेयरधनी बुटवल पावर कम्पनी र लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनीका कर्मचारीका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३ (साविक खुदी गाविसका वडा नं १, २, ३ र ६ मात्र) तथा मर्स्याङ्दी​ –६, ७ र ८ (साविक बाहुनडाँडा गाविस र साविक भुलभुले गाविसका सम्पूर्ण वडा) का स्थानीय बासिन्दाका लागि पाँच लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो ।
आईपीओमा एनएमबि बैंकको बेसींसहर शाखा, सिभिल बैंकको भुलभुले शाखा तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको बेंसीसहर, उदिपुर, दोर्दी, भोर्लेटार, सुन्दरबजार र भोटेओडार शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीले कम्पनीको कार्यालय बुद्धनगरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईमएई क्यापिटल छ । यससँगै इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तेह्रथुम पावरको आइपिओ भदौ ९ गतेदेखि खुल्ने
सर्वसाधारणका लागि तेह्रथुम पावर कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भदौ ९ गतेदेखि खुल्ने भएको छ। कम्पनीको आइपिओमा भदौ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
प्रतिसेयर अंकित मूल्य १ सयका दरले ८ लाख कित्ता सर्वसाधारण समूहको सेयर निस्कासन हुन लागेको हो।यसको ५ प्रतिशत सामुहिक लगानी कोषका लागि र २ प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याएपछि बाँकी रहेको ७ लाख ४४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुनेछ।
कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ६० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। तेह्रथुम जिल्लामा कम्पनीले ७.५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपालले बीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ।
यसले कम्पनी दायित्व वहन गर्न औसत मध्यम क्षमतामा रहेको जनाउँछ। कम्पनीको बिक्री प्रवन्धकका रुपमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ।
यसअघि कम्पनीले प्रभावित स्थानीयका लागि आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ।
साउन ३२, २०७८0comment